Machina Fekitori | China Machina Vagadziri, Vatengesi
DL-M CNC lathe inozara-basa CNC lathe ine mbiri kuronga, maviri akabatana kubatana uye hafu yakavharwa chiuno kudzora inogadzirwa nekambani yedu. Mutumbi wemuchina wevashanyi unokandwa seyese, njanji yemubhedha njanji ndeye 45 ° yakamisikidzwa dhizaini, iine kuomarara kwakasimba, chigaro chinotsvedza mutumbi inowirirana giraidhi njanji, iine diki yekukwesana coefficient uye yakanaka inesimba maitiro. Iyo yekudzvanya sisitimu inotora yeJapan FANUC 0I-TF (5) system (kana mamwe epamba uye ekunze emhando yepamusoro masisitimu) uye AC servo drive, iri nyore kushanda, kuvimbika kushanda. Chokurukisa injini adopts chikuru injini simba mukuru, mukuru torque uye kumhanya.
CNC Turning Center ndeye matatu-akabatana semi-akavharwa chiuno kudzora kutendeuka nzvimbo, mainjini inodzorwa neFANUC 0I-TF (1) system, ac yakafara nzvimbo servo mota, simba iri 18.5 / 22kW, inogona kushandiswa kutendeuka, kuchera , Kugaya zvikamu zvakasiyana-siyana zvinotenderera.
Iyo yakasarudzika yakaoma uye yakasimba dhizaini yemuchina chishandiso, kuburikidza nekudzokorora simulation uye kuverenga kweinjiniya mechanics, yakagadzirirwa yakasimba uye yakagadzika mubhedha mamiriro, kusangana neinjiniya zvinodikanwa zvakapetwa kuomarara uye kudzikisira mhando. Yakazara kuomesa kweterevhizheni inotsvedza, iine chaiyo kukuya kugadzira, kusanganiswa nehunogutsa hunhu hwechokwadi. Haisi chete inokodzera ndiro, ndiro, goko, kunyatsoita zvikamu zvekugadzirisa, asi zvakare inokodzera kugadzira mold. Muchina unogadzirirwa otomatiki chishandiso chinjana system (ATC), yakazara yakavharidzirwa inodzivirira, inodzivirira lubrication system, kutonhora sisitimu, inotakurika manual oparesheni chishandiso (MPG). Zvikamu zvinogona kupedzwa mushure mekukochekera kwekugaya, kufinha, kuchera, kuwedzera, kudzoreredza, kurova uye mamwe maitiro, iine degree rakanyanya reotomation, kuvimbika kwakasimba, kushanda kuri nyore, kuri nyore, kunofadza, kutaridzika kwese kwekunaka, kwakanyanya degree remuchina uye magetsi ekubatanidza zvakanakira.